Tirada iswiidhishka u bukooda cudurka kaankarada oo badatey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tirada iswiidhishka u bukooda cudurka kaankarada oo badatey
La daabacay onsdag 13 mars 2013 kl 09.11
" hala mamnuuco cabista sigaarka"
Tirada dadka Iswedhen uu ku dhaco cudurka kanserka ayaa korartey. Kordhitaankaas oo weliba la moodo mid xowli ku socda, sida ay warbaxintooda sannad laha ah ku sheegeen ururka Cancerfonden.
20:kii sanno ee ugu denbeysey buukanka uu ku dhacay cudurkan kanserka ayaa qiyaastii kordhay boqolkii 1,7 calaa sannadkii.
Ururka Cancerfonden ayaa sheegay cabista sigaar ay sababto dhimashada dad faro badan sidaas darteedna la joogo xiligii la mamnuuco lahaa gabi ahaantiis cabista sigaarka.
- Waxaan aaminsanahey in cabista sigaarka ay dhibaato badan aduunka maanta ku heyso, saas darteed waxaa la joogaa xiligii uu qofka iskadeyn lahaa gabi ahaantiisba. Geeri kastaa oo sigaarka keeno waa masiibo ku habsatey bukaanka iyo weliba ehelada, ayuu yeri Ola Brodin oo ka trisan ururka cancerfond.
Ururada kanserka sambaaha ku dhaca iyo weliba ururada bukaanada kanserka ayaa waxay dalbanayaan in cabista sigaarka tirtiib tartiib meesha looga saaro kabacdiina gabi ahaantiisna la mamnuuco laga bilaabo sannadka 2025, markaas oo ay tahay in la mamnuuco ka ganacsiga iyo soo saaridaba sigaarka.
Arintaas ayaa kamicno ahaan karta in Iswedhen ku dayato dalka New Zeeland, dalkaas oo barlamankiisa dejiyey qorsho sigaarka looga maamnuucayo dalkaas 12:ka sanno ee soo socda.
Mamnuucid noocaan ah waxay meel ka dhac weyn ku tahay xoriyada qaaska ah ee ruuxa ayey qoreen ururadaan doonaya in la mamnuuco sigaar laakiinse waxay sheegeen in markan taa loo barbar dhigo dhibaatada uu sigaarka dhaliyo aysan dooda noocas ah ee xoriyada aysan culeys sidaas u sii weyn la heyn.
- Ku dhawaad boqolkii 2 ilaa 5 ayaa Iswedhen iyo guud ahaan dadweynaha aduunka u geeriyooda cudurka kanserka sanbaha ku dhaca ee uu dhaliyo sigaarka ayuu yeri Ola Brodin.
Ururadaan kanserka ayaan doonaye keliya in la mamnuuco tobaakada la shito oo la cabo balse aan dooneynin la mamnuuco tobaakada sideeda kale loo qaato.
- maya tobaakada sidee loo qaato ma jirto cadeyn muujineysa in ay dhaliso kanser, mana jirto daraadsado si cad u muujinaya in ay dhaliso kanser ayadoo weliba si aad ah cilmi baaris arintaan loogu sameeyey ayuu yeri Ola Brodin.
Hadaba hadii la mamnuuco meyeyesan tan keeni doonin in ay batado sigaarka sida qarsoodida ah dalka loo soo geliyo. Ola Brodin ayaa aaminsan in taas dhici doonto lakiin waxuu sidoo kale aaminsayahay in mamnuucida ay sababi doonta in dhallinyarada ay dhib ku noqoto helida sigaar. Hadii ay yaraadana dadka bilaaba cabista sigaarkana taas waxay keeneysaa in dhaqanka cabista sidgaarka tartib tartiib u dhimin doono.
Hadaba su'aasha waxay tahay talooyinkaan la doonayo in lagu mamnuuco sigaar taageero ma looga heystaa siyaasiinta, Ola Brodin ayaa ilaa iyo hada heynin calaamad taa muujineysa.
Laakiin waxuu ku rajo weynyahay in siiyaasiintu arintaan jawaab celin fiican ka dhiibi doonaan.